EyeKhala 24, 2018 admin
Binance ekulungele ukungena Statistics South Korea
Binance, inkulu cryptocurrency exchange ehlabathini, silungele ukungena eMzantsi Korea. Binance uceba ukwakha emithathu ukuya kwemihlanu neenkampani basekuhlaleni kulo nyaka ngokweendaba umthombo BusinessKorea. Binance CEO Changpeng Mark waya Blockchain Partners iNgqungquthela e Seoul ngoJulayi 21st & 22makabuyele. Ngethuba esenza intetho yakhe ephambili, yena wabethelela ukubaluleka imarike South Korea, besithi inkampani yakhe ityetyiswe zabahlali kwimarike.
kutshanje Binance longeze inkonzo ulwimi Korean kutshintshiselwano yayo cryptocurrency kunye website esemthethweni, waphinda waqesha Korea Ngomlawuli zorhwebo zasekuhlaleni kunye Labdirector Binance, nto leyo mali igalelo lentlalo. Kuyaphawuleka, Binance sele exchange ukhetho abanye abarhwebi South Korea.
Bittrex inika crypto norhwebo eyake for akhawunti eqinisekisiwe
Bittrex, i US esekelwe crypto-exchange ukuba izibambo ngoku $150 million imithamo zorhwebo, sele iqalile nomnikelo iidiphozithi USD kunye notsalo kwakunye ngababini zorhwebo. Bittrex uthi: "Bittrex ngoku ixhasa akhawunti abafanelekileyo kunye lwenkampani US Dollar (iUSD) trading, deposit USD, kunye notsalo USD. abathengi International kunye nabo ezisebenza California, Inew york, Montana, kunye Washington State zingobani iqinisekisiwe akhawunti bafanelekile. "
Ukuze lokuthengisa eyake, abantu kufuneka acele imvume, & ukuthumela ID ne ubungqina bedilesi. Kuba kwakhona aziphelelanga nje ezine ithi kwi US, kodwa eqaphelekayo ibe sisananelo enkulu sele uphumile ukusuka crypto-to-crypto zokurhweba, ukuze ngoku crypto-to eyake. Basebenzisa ukuba Crypto exchange enkulu kanye, kudlula Poloniex, kodwa ke weza Binance yamfikela zombini.
inkqubo yentlawulo entsha UK Central Bank ukuba usebenzise blockchain
I-Bank of inkqubo iintlawulo ezihlaziyiweyo eNgilani iya kuba isebenzisane kunye neefom zobuchwepheshe zemali blockchain-based. Le yinxalenye yemizamo oluqhubekayo BoE ukuba kwanokuphucula Real-Ixesha inkqubo yayo Settlement Gross (RTGS), nto kubalulekile ukuba ukubhankisha kunye norhwebo eBritani kwaye ujongana iintengiselwano elibiza £ 500 billion ngonyaka, okanye phantse isahlulo sesithathu imveliso noqoqosho zeli lizwe.
Le nkqubo zaphuculwa kulindeleke ukuba kuphehlelelwa 2020, kwaye aza kusungulwa ukuze zimelane Cyber-ukuhlaselwa ngelixa ekhoyo kwakhona kwinani ngokubanzi lamashishini amancinci. urhulumente eBritani unqwenela ukuba United Kingdom ukuba ahlale iziko elikhokelayo fintech ezintsha ezifana iintlawulo kunye blockchain, kwaye kungoku nje liphanda ukuba inkqubo RTGS nezilungisiweyo anokunika kwaye usebenzise "ubungqina icryptographic" ukuba bayeke data ziyabiwa okanye etshintshiweyo.
ukukhonya Izinga Bitcoin libetha irekhodi eliphezulu ukuba 2018 kuzalisa 46.5%
Ngokutsho kwe data enikezwe yi CoinMarketCap, kutshanje ukubalasela Bitcoin kaThixo hit 46.5% uphawu okokuqala ukusukela ngoDisemba 2017. ukubalasela Bitcoin kumelwa isabelo Bitcoin kweli cap yemakethi ukuba cryptocurrency. Ukwanda okulawula Bitcoin iye kungqamane ixabiso BTC xa ufikelela layo eliphezulu seenyanga ezimbini ngoJulayi 23 ($7,820) kwaye kubonakala ukuba ukubonisa ukuba Bitcoin usenguye “gateway cryptocurrency” ngokuba uninzi zabatyali: kuphela emva kokuba okuthenga BTC ukuze baqale abantu abangafaniyo nemfuyo yabo crypto.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ukubalasela Bitcoin akuthethi ngokwaneleyo ukumela imeko yangoku imarike crypto ukususela iingqekembe ezininzi ngokoqobo mayibonakale yonke imihla. Nangona unogumbe ubunzima altcoins ezintsha, Bitcoin nangoku bebambelele nkqi kwelo nani, kwaye uptick yasenza isenokubonisa BTC iza kuqhubeka ngokwandisa isabelo yawo kwiimalike.
isixeko chinese iqala $ 1.5B blockchain fund
Nanjing, ikomkhulu kwiphondo Jiangsu, Kuxelwe lasungula ongaba fund utyalo 10 billion yuan ukukhuthaza iteknoloji blockchain kunye noqoqosho ithokheni-based. Nanjing likhaya enye enkulu mazibuko kwelizwe ehlabathini. Alibaba, omnye iinkampani zobugcisa ezinkulu ehlabathini, wakhetha Nanjing njengoko kwikomkhulu ishishini zezimbiwa cryptocurrency ngo-Oktobha 2017.
ingxowa-mali zikamasipala yadalwa kubanjiswene nee-arhente zikarhulumente. Yuandao, usihlalo of a lendawo “Blockchain Alliance” wathi “amashishini ngaphezulu ukwamkela ubugcisa blockchain kuthetha ukuba abaninzi ziyalandela.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 23.07.2018
$159M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Thenga, athengise, yintoni ekufuneka yenziwe ...
Post Next:Blockchain News 25.07.2018